BEPC-CISCO ANALAMANGA : Hanomboka anio ny Fitsarana ny taratasim-panadinana
Tsy miandry ela ny Cisco Analamanga. Anio ihany dia hanomboka ny Fitsarana ireo taratasim-panadinana aorian’ny fanangonana. Tsiahivina fa nifarana tanteraka omaly ny fanadinana BEPC nanerana ny Nosy, ho an’ireo nanaraka ny sokajy B. 12 septembre 2019
Ireo izay nisafidy ny sokajy A kosa dia mbola hiatrika ny taranja anglisy izy ireo ho an’ny anio maraina ary aorian’izay no hifarana tanteraka amin’ny fomba ofisialy ny fanadinana. Miisa 38 ireo ivon-toerana fitsarana fanadinana ho an’ny Cisco Analamanga. Amin’ny ankapobeny dia saika any amin’ireo sekoly lehibe avokoa no hanatanterahana ny fitsarana ny taratasim-panadinana. Ny an’Antananarivo renivohitra, ohatra, dia ao amin’ireo lisea lehibe miisa fito toa ny lisea JJ Rabearivelo, Jules Ferry, LMA sy ireo maro hafa no hanatontosana izany.
Tahaka ny mahazatra hatramin’izay dia herinandro eo ho eo no fotoam-pitsarana ireo taratasim-panadinana.
Isan’ny mampitaraina ireo mpampianatra mpitsara ny taratasim-panadinana hatramin’izay ny fahataran’ny tambin-karama omena azy ireo rehefa fotoana tahaka izao. Matetika roa na telo taona aty aorian’ny hahavitan’ny asa foana vao mivoaka io tambin-karaman’ny mpampianatra io ka mampitaraina azy ireo fatratra. Tamin’ny taon-dasa, ohatra, raha tsy nanambana nanao fitokonana mihitsy ny sendikan’ny mpanabe eto Madagasikara tsy namoaka izany ny mpitondra.
Raha nanontaniana mahakasika io tambin-karama io ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena dia nilaza fa efa vonona ny mahakasika izany ary aorian’ny fahavitan’ny asa dia hivoaka avy hatrany izany. Tsiahivina hatrany fa mbola voasokajy ao anatin’ireo kely karama indrindra eto Madagasikara ny mpampianatra ka tsy tokony hatao ambanin-javatra ny fijerena ny tombontsoany rehefa fotoana tahaka izao.